Articles in Mandalay Trend
Categories Mandalay Trend
Mandalay Trend 146
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရိုးရာအစားအစာ၊ လူကြိုက်များတဲ့ အစားအစာဆိုပြီး နေရာဒေသအလိုက် ကွဲကွဲပြားပြားရှိတတ်ကြပါတယ်။ အစားအသောက်ဆိုတာ လူနဲ့တည့်တဲ့အတွက် အရသာရှိတာမှန်သမျှကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ Read full article
အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာ လူတွေရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်မက်ခြင်းကိုတော့ ဖန်တီးမှုလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူဆချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Read full article
ခေတ်အဆက်ဆက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ Apple ရဲ့ iPhone ဒီဇိုင်းများ
Technology ဆိုတာက တိုးတတ်လာတဲ့ ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုပါပဲ။Electronics ပစ္စည်းဆိုတာ လူတိုင်းလိုလို အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွ Read full article
Gamer တွေ လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ၂၀၂၁ရဲ့ အကြီးမားဆုံး Steam Summer Sale
Valve လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Lord Gabe ကြီးကိုပြေးမြင်ကြတဲ့ Gamer ညီအစ်ကိုတွေ ရှိလား? ရှိလား? Next Level Marketing Skill တွေနဲ့ ဒီတစ်ခါမှာလည်း လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ Steam Summer Sale ကြီးက ထပ်ရောက်လာပါဦးမယ်။ Read full article
လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဆိုတာက လူတစ်ယောက်ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အရာဖြစ်ပြီး စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အပြုအမူတွေက ကွဲပြားသွားပါတယ်။ စိတ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှု၊ တွေးခေါ်မှု၊ ထိတွေ့မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ဘာသာစကား၊ ပုံဖော်မှုနဲ့ အမှတ်တရတွေမှတ်ထ Read full article
အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ရာသီဥတုပဲ ပြောင်းလဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရာသီဥတုနဲ့အတူ အနေအထိုင်အစားအသောက်တွေကလည်း တပြေးညီ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ စီးမျောနေကြတဲ့ သူတွေဖြစ်တာနဲ့အညီ Trend နောက်ကိုလိုက်ပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေက ဆန်းသစ်လာကြပါတယ်။ Read full article
USD 40~80 ကြားရှိပြီး Certificate ပါရမယ့် Free Course (၇၀)
အချိန်ဆိုတာပြန်ပြီး အစားထိုးမရနိုင်တာကြောင့် အားလပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Read full article
ဘာသာစကားလေ့လာသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ YouTube Channel, App နှင့် Tips များ
ဘာသာစကားဆိုတာက စကားပြော(ပြောသော ဘာသာစကား)၊ လက်ဟန်အမူအရာ(လက်ဟန်ပြဘာသာစကား)နဲ့ အရေးအသားတွေပါဝင်တဲ့ စနစ်ကျသောဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
ရိုးရှင်းပေမယ့် မရင်းနှီးသေးတဲ့ Personal Development
Personal Development ဆိုတာက လူတစ်ဦးရဲ့ ဗဟုသုတ၊ အဆင့်အတန်း၊ ဘဝကဏ္ဍတိုင်းမှာ မိမိကိုယ်ကို ပိုကောင်းလာဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ မူလစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ လူ့အရင်းအနှီးကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ Read full article
by Win MM Htay on 08 March, 2021
ပုဂံမြေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်များစွာ စုဝေးတဲ့ နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဒေသတစ်ခုဖြစ်သလို၊ မြန်မာ့သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း လေ့လာသင့်တဲ့ ဒေသတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
အစာ စားပြီးချိန် ပြုလုပ်ပါက အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အရာများ
(၂၁) ရာစုခေတ်မှာ လူတိုင်း အလုပ်များကြပါတယ်။ ထမင်းစားချိန်လေးပဲ အားလို့ ဆိုပြီး အားတဲ့ အချိန်လေးမှာ ပြေးလုပ်တဲ့ အရာတစ်ခုက အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Read full article